FLITIDA ရုပ်သံလိုင်းအတွက် HITACHI HDTV ကင်မရာများသည်အဆင့်မြင့်ဥပဒေပြုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Hitachi HDTV ကင်မရာများကိုအဆိုပါဖလော်ရီဒါ Channel ကိုများအတွက်အဆင့်မြင့်-အရည်အသွေးဥပဒေပြုရုပ်မြင်သံကြားလွှမ်းခြုံ Enable
ပြည်သူ့ရေးရာ programming ကိုဝန်ဆောင်မှု Z-HD5000 စတူဒီယိုကင်မရာများနှင့် DK-Z50 box ကိုကင်မရာများတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတရားစွဲဆိုမှုလွှမ်းခြုံနှင့်စတူဒီယိုညျဘဏ်ဍာအမြင်အာရုံအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်ရွေးချယ်
Woodbury, နယူးယော့ဇန်နဝါရီလ 31, 2018 - အဖလော်ရီဒါချန်နယ်မှသုံး Z-HD5000 HDTV ကင်မရာများဝယ်ယူထားပြီးဥပဒေပြုရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှု Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ, Ltd (Hitachi Kokusai) က၎င်း၏စတူဒီယိုဘဏ်ဍာများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုဝယ်ယူ enable ရန်။ အသစ်စတူဒီယိုကင်မရာများ 26 Hitachi DK-Z50 box ကိုကင်မရာများအစောပိုင်းကပါလီမန်အဆောက်အအဆောက်အဦရဲ့အခန်းနှင့်ကော်မတီကခန်းထဲမှာ installed join ။
Tallahassee အတွက်ပြည်နယ်ပါလီမန်အဆောက်အအဆောက်အဦတွင်တည်ရှိပြီး, အဆိုပါဖလော်ရီဒါ Channel ကို WFSU-TV ကိုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကပိုင်ဆိုင်သည့် PBS အဖွဲ့ဝင်ဘူတာရုံအားဖြင့်ဖလော်ရီဒါဥပဒေပြုလွှတ်တော်တို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ် operated လူထုရေးရာ programming ကိုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြည်နယ်အစိုးရ၏သုံးခုစလုံးအကိုင်းအခက်ကိုဖုံးအုပ်ထား programming ကိုတပ်ဆင်ထားသဖြင့်, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ဝန်ကြီးအဖွဲ့သည်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်နှင့်တရားရုံးချုပ်၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, တည်းဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲလွှမ်းခြုံများအတွက်ဖလော်ရီဒါ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ PBS multicast လိုင်းများ, cable ကိုစနစ်များနှင့်ပြည်နယ်အနှံ့တံစို့ (အများပြည်သူ, ပညာရေးနှင့်အစိုးရလက်လှမ်း) ချန်နယ်များကိုပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်မူရင်းပရိုဂရမ်းမင်း၏ 2,500 နာရီနှစ်စဉ်ထက်ပိုမိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အဆိုပါဖလော်ရီဒါ Channel ကိုလည်းအားလုံးတရားစွဲဆိုမှု၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံပေး 18 ကို web စီးပေးထားပါတယ်။
ယင်း၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ session တစ်ခု feeds တွေကို Complementing, အဆိုပါဖလော်ရီဒါ Channel ကို၎င်းဥပဒေပြုလွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်များသူတို့ကိုယ်သူတို့မိတ်ဆက်ပေးနဲ့သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးဆွေးနွေးဖို့ပေးနိုင်ပါတယ်ထားတဲ့ "ပါလီမန်အဆောက်အ Update ကို" ထိပ်တန်းသတင်း, သည် "ဖလော်ရီဒါမျက်နှာမျက်နှာရန်" အင်တာဗျူးစီးရီး, နှင့် "ပတ်သ က်. " အသကျရှငျအပါအဝင်စတူဒီယိုအစီအစဉ်များကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ အသစ်တစ်စုံအသစ်အလင်းရောင်အသစ် teleprompters နှင့်ပိုပြီးအပါအဝင် - - channel ကိုမကြာသေးမီကယင်း၏ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယို၏စုစုပေါင်းစစ်ဆေးပြုပြင်တပ်ဆင်ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာသူတို့မှာလည်းစီမံကိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်၎င်းတို့၏ဆယ်စုနှစ်အရွယ်ကင်မရာများအားအစားထိုးနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူ။
Z-HD5000s ၏ဖလော်ရီဒါ Channel ကိုဖွင့်ရွေးချယ်ရေးယခင်က-installed DK-Z50 ယူနစ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုကမီးလောင်ရာခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ကသူတို့အ box ကိုကင်မရာများကထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်အချက်ပြမှုအရည်အသွေးကိုနှစ်သက်ခဲ့ကြသည်, ငါတို့သည်စတူဒီယိုများအတွက်အရည်အသွေးကြောင့်တူညီတဲ့အဆင့်ကိုလိုချင်," တယ်ရီ Longordo, WFSU-TV ကို / အဆိုပါဖလော်ရီဒါ Channel ကိုမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အင်ဂျင်နီယာကဆိုသည်။ "ဟုအဆိုပါ Z-HD5000s အပေါ်အရာအားလုံးကျနော်တို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်ဘယ်အရာကိုလိုက်ဖက်။ "
အဆိုပါဖလော်ရီဒါ Channel ကိုပထမဦးဆုံးရွေးချယ်ထားသောအခန်းခေတ်မမီတော့, Non-မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်မော်ဒယ်များကိုအစားထိုးရန်အတွက် DK-Z50 box ကိုကင်မရာများရှေးခယျြထားသညျ့အခါရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုအလားတူအဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့အသေးအစည်းအဝေးခန်းတချို့အောက်ပိုင်း-ကုန်ကျစရိတ်, All-In-One ကင်မရာများကိုအသုံးပြုဖို့နေစဉ်, သူတို့ကျနော်တို့ကပါလီမန်အဆောက်အ Complex မှာ Knott အဆောက်အဦးနှင့်အောက်လွှတ်တော်နှင့်အထက်လွှတ်တော်အခန်းရှိသည်ပိုကြီးတဲ့နေရာများကိုဖုံးလွှမ်းရန်ကောင်းစွာသင့်လျော်ကြဘူး," ပြန်ပြောပြ Longordo ။ "ကျနော်တို့ကပိုကြီးတဲ့အခန်းပေါင်းများအတွက် beefier, ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကင်မရာများနှင့်လေးလံစက်ရုပ်စနစ်များချင်တယ်။ ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြီးအဆိုပါကင်မရာများထဲကကျနော်တို့အကောင်းဆုံး Hitachi ကင်မရာများနှင့်အတူရတယ်ရလဒ်ကြိုက်တယ်။ ကျနော်တို့က DK-Z50s များအတွက်အဟောင်းကင်မရာများထွက်ပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကဗီဒီယိုအရည်အသွေးထူးခြားတဲ့ခြားနားချက်သတိပြုမိသည်။ "
ရှစ် DK-Z50 ကင်မရာများယခုအထက်လွှတ်တော်အခန်းကပိုခြောက်လနှင့် Knott အဆောက်အဦးထဲမှာနှစ်ဦးကိုအကြီးဆုံးကော်မတီကခန်း၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အခြားခြောက်ဦးနှင့်တကွ, အိမ်ထရံအခန်းများတွင်အသုံးပြုနေကြသည်။ အဆိုပါ DK-Z50s အားလုံးသည် FUJINON HAs18x7.6BZD-T5DD zoom မှန်ဘီလူးများနှင့်အတူတွဲနှင့်စက်ရုပ်အပေါ် operated နေကြတယ် Ross ကဗီဒီယို CamBot 500 စီးရီးဒယ်အိုး / tilt အကြီးအကဲများ။
Longordo ပါလီမန်အဆောက်အအဆောက်အဦအတွက်အလင်းရောင်-related စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကင်မရာများ '' စွမ်းရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ "ဒီကော်မတီကအခန်းပေါင်းကင်မရာအသုံးပြုမှုများအတွက်ဒီဇိုင်း, ဒါကြောင့်အလင်းရောင်အလွန်အခြေခံဖြစ်ပါသည်ဘယ်တော့မှခဲ့ကြသည်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တို့ကအထူးသဖြင့်လူဦးတို့သည်စင်မြင့်ထက်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ရှိရာပေါ် မူတည်. အချို့ကြမ်းတမ်းအလင်းရောင်အခြေအနေများအရ။ အဆိုပါ Hitachi ကင်မရာများကျွန်တော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်အလင်းရောင်န့်အသတ်ရှိနေသော်လည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
"ငါသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံး DK-Z50 နှင့် Z-HD5000 ကင်မရာများကနေရယူအရည်အသွေးနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါပြီ" ဟုသူကအကျဉ်းချုံး။ "သူတို့ကကျိန်းသေကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ပရိုဂရမ်းမင်း၏အရည်အသွေးဆောင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အများပြည်သူထွက်ပေးပို့ပြီ။ "
Hitachi Kokusai လျှပ်စစ် Inc ကို (Tse: 6756) တိုကျို, ဂျပန်, ဌာနချုပ်, အသံလွှင့်စနစ်များ, လုံခြုံရေးနှင့်စောင့်ကြည့်စနစ်များ, ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုနှင့်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာကုန်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ (မတ်လ 2016, 31 အဆုံးသတ်) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် 2017 အသားတင်ရောင်းချမှု 171,857 သန်းယန်း ($ 1,531million) စုစုပေါင်းစုစည်း။ Hitachi Kokusai လျှပ်စစ် Inc ကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.hitachi-kokusai.co.jp/global/en/index.html.
ကှတျချစက္ခုဗေဒ SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-01-31
ယခင်: Sonoris DDP Player ကိုကို iOS App ကိုအတူ Convenience နှင့်ထိထိရောက်ရောက်ကိုပိုကောင်းစေ
နောက်တစ်ခု: ZEPLAY နယူးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူ 2018 NAB Show မှာပြန်ပေါ်ထွက်လာ